Howlgal Nafhurnimo oo ka dhacay koonfurta Afqaanistaan. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
On Sep 19, 2019 321 0
Wararka ka imaanaya dalka Afqaanistaan ayaa ku waramaya in aroornimadii hore ee manata oo Khamiis ah uu dhacay weerar weyn oo nafhurnimo ah, kaas oo lagu qaaday xarun ay deganyihiin sirdoonka xukuumadda Kaabul.
Weerarka oo loo adeegsaday gaari weyn oo miineysan, islamarkaana uu kaxeynayo naftii hure katirsan Dhaalibaan ayaa lagu qaaday xarun ay Sirdoonka xukuumadda ku leeyihiin magaalada Qalaat ee gobolka Zaabil, ee dhaca koonfurta Afqaanistaan.
Naftii huraha ayaa ku guuleystay inuu gaaro hadafki uu beegsanayay, islamarkaana uu dhulka la simo inta badan xarunta ay ku sugnaayeen ciidamada sirdoonka xukuumadda Kaabul.
Afhayeenka Imaarada islaamiga Dabiixullaahil Mujaahid ayaa war uu soo saaray wuxuu ku sheegay in camaliyadda ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen tobanaan askari oo katirsan sirdoonka xukuumadda Kaabul.
Dhanka xukuumadda, war ay soo saartay waxay ku xaqiijisay inuu jiro weerarka, islamarkaana ay ku dhinteen ugu yaraan 20 ruux, kuna dhaawcameen ku dhawaad 100 kale, balse waxay ka been sheegtay xaqiiiqda waxay yihiin dadkaas.
Waa weerarkii ugu dambeeyey ee ka dhaca Afqaanistaan, wuxuuna qeyb ka yahay howlgalka Al-fatxi ee sida adag uga socda guud ahaan dalka.